Archive du 20181025
Manifesto an-dRavalomanana Misy maka tahaka sahady
Miharihary ny tsy fahamatorana misy eo amin’ny mpanao politika Malagasy amin’izao fotoanan’ny fampielezan-kevitra izao.
Hivory eny amin’ny CCI Ivato ireo kandida 26 mitaky ny fanemorana ny fifidianana anio alakamisy 24 oktobra raha tsy misy, ka vahoaka an’arivony mpanara-dia no hanampy tosika azy ireo, raha ny nambaran’ny Kandida Tabera Randriamanantsoa.
Ny lalàna dia mamaritra fa mandritra ny fe-potoan’ny fifidianana, ka tafiditra amin`izany ny fampielezan-kevitra, dia
Fanomanana fifidianana tsy tomombana Azo vahana tapakandro, hoy ny ABA
Tsy vao izao no nisy tsy fahatomombanana ny fanomanana ny fifidianana, hoy ny filohan’ny antoko politika Antokom-Bahoaka Malagasy (ABA), Dany Rakotoson. Ny nampiavaka azy fotsiny dia izy be loatra angamba tamin’ity.
Tompon’andraiki-panjakana hotorian’ny DFP Mety hihoatra ny 100
Miditra amin’ny herinandro fahatelo ankehitriny ny fampielezankevitra, hoy ry zareo avy eo anivon’ny Dinika Fanavotam-Pirenena (DFP).
Fampandrosoana an’i Madagasikara Ny fandaharanasan’i Dada no matotra indrindra
Tsy takona afenina intsony fa loharanona aingam-panahy ho an’olona maro Atoa Marc Ravalomanana sy ny fandaharanasany.
Marc Ravalomanana Hamono tena aho hampandrosoana ny firenena
Ny andron’ny omaly moa, dia tany Tanambe, Andilamena, Mahazomana, Maevatanàna, Mahajanga no nanaovan’i Marc Ravalomanana fampielezan-kevitra, ary an’aliny maro na an’hetsiny mihitsy aza ny vahoaka nandray azy tamin’ireo toerana ireo.
Firaisamonim-pirenena Mitsipaka ny fanemorana ny fifidianana…
Nanao fanambarana mikasika ny raharaham-pifidianana ankehitriny ny fikambanana ROHY sy ny Transparency International Initiative Madagascar omaly tetsy Ambatonankanga.
Kandidà 26 Hotanterahina anio ny fihaonambe
Anio no hotanterahina eny amin`ny CCI Ivato ny Fihaonambe ho an`ny fiandrianana na “conference souveraine” karakarain`ireo kandidà 26.
Politika eto Madagasikara Tena hiasan’ny demonia…
Fivorian’ny Antenimieram-pirenena omaly Niompana tamin`ny fampindramam-bola an`i Madagasikara
Volavolan-dalàna miisa 4 mahakasika manokana ny Fampindramam-bola an’i Madagasikara no nolanian`ireo ireo solombavambahoaka tetsy amin’ny Lapan’i Tsimbazaza omaly.
Vahoaka malagasy Hanafay mpanao politika indray
Rehefa nodinihina ny fihetsiky ny Malagasy hatramin’izay, hoy ny mpanao politika iray, dia tsy dia hoe tsy fahatongavan-tsaina
Mpiasan’ny fadin-tseranana sy fitsarana Mikaon-doha handinihana ireo hetra tsy hita
Nikaon-doha tetsy Tsaralalana omaly ireo mpiasan’ny minisiteran’ny Fitsarana sy ny mpiasan’ny fadin-tseranana manoloana ireo raharaham-pitsarana mety misy eo anivon’ny fadin-tseranana.
Sambo rendrika tany Marovoay Fatim-behivavy 3 no hita
Tafakatra telo hatramin’ny omaly hariva fotoana nanoratanay ny isan’ireo faty hita tany Marovoay nandritra ny faharendrehan’ilay sambo Amboara tany an-toerana ny talata lasa teo.
Basket N 1 A Miala sasatra kely anio fa hiatrika 1/4-dalana
Miala sasatra kely anio alakamisy 25 oktobra ireo mpifaninana lahy sy vavy miatrika ny fiadiana ny ho tompondaka nasionaly 2018 taranja basikety sokajy N1 A taorian’ny fahavitan’ny andro faha-6 tamin’ny fifanintsanam-bondrona omaly alarobia 24 oktobra. Miditra amin’ny lalao 1/4-dalana rahampitso zoma 26 oktobra ny fifaninanana.
Maharitra Ali Petera Filohan’ny fileovana rugby Hiza 17
Velirano very sahady
Betsaka ny fanehoan-kevitra avy amin’ny olom-pirenena, mpanao politika, mpitondra fivavahana, mpandraharaha, rehefa mety ho malagasy mikasika ny toetra tokony hananan’ny filoham-pirenena.
Sehatra harena ankibon’ny tany Manome 1 hatramin’ny 5% monja amin’ny harinkarena faobe
Ampahafantarina nanomboka ny alatsinainy eny amin’ny Mining Business Center Ivato ny harena ankibon’ny tany Malagasy.
Fiaingan’ny toekarena Azo ahena ny sehatra fambolena
Na dia nahitana fitomboana kely ary ny fandraharahana amin’ny sehatry ny orinasa dia tsy amin’ny tokony ho izy eto Madagasikara. Manome 15% monja amin’ny tahan’ny harinkarena faobe ny sehatra Indostria.
Tovovavy roa nisy namono Niteraka savorovoro tao Andapa
Mafampana ny toe-draharaha any Andapa any ankehitriny. Raha ny fampitam-baovao dia mihorohoro ny ao an-tanàna noho ny resaka tifitra nandratra olona maro nataona zandary.
Fenoarivo Atsinanana Polisy telo lahy matin'ny fitsaram-bahoaka
Nanatanteraka iraka tany Fenoarivo Atsinanana ireo polisy ara-toekarana na “Police Économique” miasa ao Toamasina no nataon'olona fitsaram-bahoaka rehefa nanao "perquisition" na fisavana, izay tamin'ny fomba ara-dalàna,
Nanao fanambarana indray omaly ry zareo avy eo anivon’ny fivondronan’ireo hetsiky ny fiarahamonim-pirenena, Rohy, fa tsy manaiky ny hanemorana ny fifidianana. Tsy ara-dalàna izany, hoy izy ireo.
Tsy fahampian’ny kara-panondrom-pirenena Tsy andraikitry ny tranompirintim-pirenena, hoy ny taleny
Mbola misy kaominina nandrenesana feo ihany tato ho ato fa tsy maharaka ny filan’ireo mponina feno 18 taona ao aminy ny isan’ireo kara-panondrom-pirenena voarainy.
Fandraharahana amin’ny sehatra fambolena eto Madagasikara Hiantoka amin’ny fampandrosoana ara-toekarena
Tsy mitsahatra ny fitombon’ny mponina eto Madagasikara kanefa tsy mifanaraka amin’ny famokarana izany.